Egwuregwu Egwuregwu Ndị Ahịa na-ahụ maka Mmekọrịta na-emepụta mmekọrịta dị mma n'etiti ụlọ ahịa ecommerce na ndị ahịa ha maka ahụmịhe echefu echefu nke ga-eme ka iguzosi ike n'ihe na ego nweta. ECRM nwere ike karịa onye na-eweta ọrụ Email (ESP) na ndị ahịa-lekwasịrị anya karịa ikpo okwu Mmekọrịta Mmekọrịta Ndị Ahịa (CRM). Kedu ihe bụ ECRM? ECRMs na-enye ndị nwe ụlọ ahịa dị n'ịntanetị ume ịkọwapụta ụdị ndị ahịa pụrụ iche-ọdịmma ha, ịzụrụ ihe, na akparamagwa-ma nyefee ọmarịcha ahụmịhe ndị ahịa ahaziri iche nha site na iji data ndị ahịa anakọtara n'ofe ọwa ahịa agbakwunyere.
Ruo ọtụtụ afọ, ekwuputala m na mgbanwe ahụ bụ naanị oge niile ndị ahịa kwesịrị inwe ntụsara ahụ. Mgbanwe na teknụzụ, ndị na-ajụ ase, na ọwa ndị ọzọ rụgidere ụlọ ọrụ iji gbanwee ihe ndị ahịa na azụmaahịa chọrọ. N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, a na-amanye ụlọ ọrụ ka ha doo anya na mmadụ na mbọ ha. Ndị ahịa na azụmaahịa malitere ịme azụmahịa iji kwekọọ na nkwenye ha na nkwenkwe ha. Ebe ndi otu a jiri hiwe ntọala ha
Ma ọ bụ nyocha abụọ ma ọ bụ na-eme ndoputa nri abalị, ana m amalite ịchọpụta na enwere m ike karịa iji ozi ederede (SMS) karịa afọ ole na ole gara aga. Echeghị m na ọ bụ naanị m… na-azụ ahịa na azụmaahịa myiri na-enwe obi ụtọ karịa izipu ma nata ozi ederede karịa ka etinyere gị na ekwentị. N'okwu a, agbanyeghị, otu esi ejikwa nkwukọrịta niile na ọkwa azụmaahịa. Nke ahụ bụ ebe ederede ozi nyiwe abịa
Fraịde, Ọgọstụ 7, 2020 Fraịde, Ọgọstụ 7, 2020 Dhruv Mehta